Madasha Badbaado Qaran oo shir degdega u furmay | KEYDMEDIA ONLINE
Madasha Badbaado Qaran oo shir degdega u furmay
Kulanka ayaa hereer socda midka Farmaajo uu ka wado teendhada Afisyooni, oo ay ka qeybgalayaan saddex Maamul madaxdooda, duqa Muqdisho iyo Rooble.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madasha Badbaado Qaran ayaa galabta shir degdega uga furmay gudaha xarunta Xalane, kaasoo diiradda lagu saarayo arrimaha taagan ee la xiriirka doorashadda iyo mowqifka ay ka qaadanayaan shirka Afisyooni.
Kulanka waxaa ka qeybgalaya dhamaan xubnaha ku midoobey Madasha Badbaado Qaran oo maalmo kahor la dhisay, kuwaasoo kala ah musharixiinta, Axmed Madoobe, Deni iyo Cabdi Xaashi.
Wuxuu kulanka Madasha Badbaado Qaran imaanayaa xili maalintii labaada teendhada Afisyooni uu ka socdo Shir uu gudoominayo Farmaajo, kaasoo ay qaadaceen Axmed Madoobe iyo Saciid Deni oo ku sugan Xalane.
Dhanka kale, waxaa socota Waan-waan uu wado ergayga gaarka ee QM James Swan oo ku doonayo inuu Axmed Madoobe iyo Deni ugu qanciyo inay tagaan Shirka Afisyooni, iyadoo Mareykankana maanta ku baaqay in si shuruud la'aan ah looga qeybgalo wadahadallada.